Yini Cyclamen ezinhle? Ukunakekela lezi zitshalo.
isitshalo Cyclamen kuyinto enhle ukuze ufuna ngempela ukubona endlini yakhe, uzama ukuqoqa njengoba eziningi zalezi izitshalo izimbali egqamile futhi ezimibalabala. Nokho, ngokuvamile kakhulu, kanye imvelo ekhaya, Cyclamen uqala "ukuhola" ezingalindelekile, okungukuthi luphola futhi ilahlekelwa ubuhle bayo. Mangisho ukuthi lokhu kuyisibonakaliso kuqala ukuthi ukunakekelwa okungafanele simila lahlelwa.
Ukuthenga Cyclamen, ukunakekelwa leyo akuyona kangaka nzima njengoba kudingeka onzima, ukunakekelwa okufanele zikhokhelwe amahlamvu nokuyizigaxa. Nokho, abaningi kuyomelwe uwaphule ikhanda lakho phezu yini izimbali umbala ukukhetha? Akubuzwa, ukuthi amaqabunga isitshalo kufanele kungabi umonakalo obonakalayo futhi tuber - njalo uphilile futhi abanalo izimpawu bola. Thenga Imbali Cyclamen, ukunakekelwa kanye okuzokwenza kwenziwe ekhaya, the best ekwindla, lapho isitshalo iyaqala nje eziqhakaza.
Ngomqondo onabile, inkulumo imbali Cyclamen zingatshalwa imbewu bebodwa. Nokho, isiqinisekiso sokuthi lesi sitshalo kuyoba enempilo ngempela, akukho. ke Kuyancomeka ukuthenga Cyclamen ngomumo eyenziwe ezitolo, ziletheni ekhaya, ngisho ekhaya futhi abenzele ukunakekelwa efanele.
Indlela anakekele Cyclamen imbali? Kufanele ukuthi lesi sitshalo ukunakekelwa kubaluleke kakhulu efanele, kanye ukunamathela ngokuqinile lokushisa yayo elikhulu ekukhuleni, okuyinto akumele kube ngaphezulu kuka-degree 20, futhi isamba elanele ukukhanya. Nokho, kumelwe uzame sikhule Cyclamen endaweni lapho ngeke kuwele elangeni. Kungenjalo, amahlamvu ungathola ukusha.
Kwezinye izimo, Cyclamen, ukunakekela kanye nokuthuthukisa okuyinto kuxhomeke ngokuphelele kithi, akunakwenzeka ukuba ikhule ezindaweni lapho izitshalo akuzona izinga lokushisa elikhulu zizonikezwa. Kulokhu, kwakuqabukela ngifika kanje: ukusaphazela kusukela spray phezu isitshalo efudumele kodwa amanzi preliminarily bavikela. Kodwa ngezinye izitho zonke zinakekelane ngokufanayo isikhathi okufanele zithathwe ukuze amaconsi amanzi ningaweli ku izimbali neziqu.
Nokho, akumelwe sikhohlwe ukuthambisa Cyclamen ezinhle. Ukunakekela lezi zitshalo kuyinto ukukhanyisa hhayi kuphela okwanele, kodwa ukuthambisa avamile. Nokho, ngokusinikeza inala samanzi okunisela kufanele kube ngobumnene uthele pan kuphela, noma eduze emaphethelweni ebhodweni, ukuzama ukuvimbela ingress amanzi phezu isitshalo uqobo. Kodwa-ke ukunisela ngenkasa, kodwa futhi umzamo ngokweqile kulokhu, futhi, kungaba yingozi simila, futhi uzoqala nje ukubola.
Uma Cyclamen ngasekuqaleni kwentwasahlobo embozwe amahlamvu phuzi ngalesosikhathi ethukile ngakho akufanele kube. Yellowing of amaqabunga kusho ukuthi Cyclamen uqala "ukuzumeka." Ngesikhathi bangaba angenalutho nokuyizigaxa izitshalo. Ngezinye izikhathi ngisho siqale ukucabanga ukuthi bashonile. Nokho, akuyona. Lokhu akukhona ukufa izimpande, futhi uhlobo utiligi. Izoqala nini umjikelezo entsha ekuthuthukiseni izimpande Cyclamen liphile futhi.
Kulokhu, zidinga kule Cyclamen isimo? Isondlo nokunakekela futhi. Nokho, ukubheka ngalesi sikhathi, izitshalo akufanele kube njalo ngokucophelela. Kungcono umane ukuqinisekisa ukuthi inhlabathi usuke hhayi womile, futhi iziphi Cyclamen esekhulile. Ngaphezu kwalokho, kuyoba ngcono uma imbiza ne isitshalo nje ukubeka endaweni ephansi ukukhanya.
Lesi sitshalo ngokuvamile "uyalala" izinyanga 2-3. isikhathi eside enjalo ongeza ezinye abatshali imbali ungathandi. Nokho, akukho lutho kungenziwa. Kodwa, lapho liyoba okuqaphelekayo, amaqabunga amasha, kuzosho ukuthi le mbali waphaphama ebuthongweni bakhe, futhi kutuswa ukuba zidluliselwa ku umhlabathi entsha, okuyinto kumele uzilungiselele izingxenye alinganayo isihlabathi, Peat kanye humus. Ngemva ukufakelwa Cyclamen zingabekwa endaweni yakhe evamile futhi uqhubeke ukuba ayilime, ayigcine njengenjwayelo.
Kanjani ukudicilela orchid ngesikhathi sokuqhakaza kwesokudla? Orchid: ukunakekelwa ngesikhathi izimbali
Horoscope. Ukuhambelana ingonyama besilisa Virgo zesifazane
Kuyini ukuphathwa? ukubhula ngezinkanyezi-predictive
Izikhwama School for girls: i Uhlolojikelele, izinhlobo, izici kanye nokubuyekeza
Ngingathola abakhulelwe ezinsukwini lokugcina lokuya esikhathini kanye ngokushesha ngemva kwabo?
Tatar Gubad: iresiphi enkantolo yomiswa izithelo
Februwari 3. Zodiac, namaholide nemicimbi emlandweni lolu suku